HTC U11 (Sprint) အတွက် Oreo update ရောက်ရှိနေပြီ! – AsiaApps
January 22, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on HTC U11 (Sprint) အတွက် Oreo update ရောက်ရှိနေပြီ!
Sprint network ရဲ့ HTC U11 အတွက် Oreo update ကတော့ဒီနေ့မှာပဲရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Sprint network မှာ HTC U11 အသုံးပြုနေသူအတွက်တော့ သတင်းကောင်းတစ်ခုလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ HTC ရဲ့ Product Management အပိုင်းက တာဝန်ရှိသူတစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Mo Versi ရဲ့ Twitter post တစ်ခုကနေသိရှိရတာပါ။
Mo Versi အနေနဲ့ U11 Sprint Oreo update အတွက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းကို ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလတည်းက ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
It’s coming soon. We’re working with Sprint to get it out as quickly as possible.
U11 အတွက် Oreo update ဟာ Sprint network ဆီမရောက်ခင် US နဲ့ Europe, the Middle East and Africa (EMEA) region တွေမှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့လက်ရှိမှာ Sprint network ဟာ Oreo update နောက်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ နေရာလို့ဆိုရမှာပါ။ ဒီလအတွင်းမှာ HTC ဟာ U11 နဲ့ HTC 10 တို့အတွက် Oreo update ဖြန့်ချီပြီးပါပြီ။ U11 အတွက် Update ကအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် HTC 10 အတွက်တော့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။
Android, Firmware Updates, HTC, Sprint